လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: August 2014
သာမန် AAA ဘက်ထရီ တစ်လုံးအား အသုံးပြု ထားတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်စက်
Sunday, August 31, 2014 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆို ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲ စဉ်းစားလို့ ရတဲ့ အသန့်စင်ဆုံး လောင်စာ တစ်မျိုးလောက်ပါပဲ။ ၎င်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနေ ထွက်လာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာက ရေပါ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက ရေမော်လီကျူးတွေ ထဲမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ အောက်ဆီဂျင် အက်တမ်တွေကို သီးခြား သတ်သတ်ဆီ ခွဲဖို့ လျှပ်စစ်စီကြောင်း အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်သုံးဓာတ်ခွဲမှု ( electrolysis) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သုတေသနပညာရှင်တွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ သံပြားနှစ်ခုကို သန့်စင် တဲ့ရေထဲ ထိုးစိုက်လိုက်ပါတယ်။ (အဖိုအမလျှုပ်စီးလိုင်း) လို့ခေါ်တဲ့ ၎င်းသံပြားနှစ်ခုပေါ် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြတ်သွားတဲ့ အခါ လျှပ်စီးမလိုင်းမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထွက်ပေါ်လာပြီး အဖိုလိုင်းမှာ အောက်ဆီဂျင် ထွက်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီသတ္တုအမျိုးအစားတွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို လုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်ပြီး ရေမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျက်စီးမှု မရှိနိုင်တာကြောင့် အခုအချိန်ထိတော့ သိပ္ပံညာရှင်များက လျှပ်စီးအဖိုအမအတွက် ပလက်တီနမ်ကဲ့သို့သော အဖိုးတန် သတ္တုများကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အကုန်ကျသက်သာပြီး ၎င်းနေရာ မှာ အစားထိုးသုံးနိုင်တဲ့ နီကယ်လ်သတ္တုတစ်မျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နီကယ်လ်သတ္တုကို လျှပ်စီးဖို/မ အဖြစ် အသုံးပြုပြီး ၎င်း အဖွဲ့က ၁.၅ ဗို့အားရှိသာမန် ဘက်ထရီတစ်လုံးအားပြုပြီးရေထဲက အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ခွဲခြားပေးတဲ့စက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေထိတော့ အဲဒီလျှပ်စီးစွန်း( electrodes) တွေဟာ ရေထဲမှာ အချိန် (၂) ရက်ကြာသာခံပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျရင် ရက်သတ္တပတ်နဲ့ချီ (သို့) လနဲ့ချီ ကြာရှည် ခံအောင် တိုးတက်မှုရလာပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီ အကုန်ကျသက်သာစေမယ် လို့ သုတေသနပညာရှင်များက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
LG L60 And DUAL Smartphone Reviews
4 GB internal and 512 MB RAM
Wi-Fi with Hotspot, Bluetooth
5 MP camera with front facing VGA camera
MSI GS60 Ghost Pro 3K Gaming Laptop Review
15.6 inches Widescreen, 2880 x 1620
Storage Capacity : 1256 GB
မြန်မာ + ထိုင်း အခြေခံ စကားပြော ဖုန်း Android , Apk
Sunday, August 31, 2014 Android Apps & Games
မြန်မာ + ထိုင်း အခြေခံ စကားပြော အဘိဓာန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းစကား လေ့လာနေသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အတွက် အသုံးဝင်သော အခြေခံ ထိုင်းစကားပြော ဖုန်း Android , Apk ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ရင် အောက်ပါ လိပ်စာကနေ ဝင်ရောက် ဒေါင်းယူပါ။
နေဇော်လင်း @ Nay Zaw Lin1
ပဟေဠိမေးခွန်း APK for Android
ဥာဏ်စမ်းလေးတွေ ဖြေကြရအောင်နော်။ ဤအသုံးချပရိုဂရမ်တွင် သင်္ချာဆိုင်ရာ ဥာဏ်စမ်း ပဟေဠိများ နှင့်ဝေါဟာရ ဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဥာဏ်စွမ်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ပဟေဠိ မေးခွန်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားနှင့်ဖြေကြ ရအောင်နော်။ နောက်ထပ် အသစ်ဆန်းလေး တွေကို စောင့်မျှော်နေပါ အုန်းနော်။
စကားတန်ဆာ APK for Android
Size :1.13 MB
ဤအသုံးချ ပရုိုဂရမ်တွင် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀ါကျများကို ဖော်ပြပေး ထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် လို ပြောဆိုရာတွင် သာမက ပေးစာအမျိုးမျိုးကို ရေးသားရာတွင်ပါ အလွန်အသုံးဝင် ပါတယ်။
စကားအလှ မြန်မာက APK for Android
Name :စကားအလှ မြန်မာက
Size :667 KB
စကားအလှ မြန်မာက အသုံးချ ပရိုဂရမ်တွင် မြန်မာစကားနှင့် ပတ်သတ်၍ စကားထာများ၊ စကားလိမ်များ နှင့် စကားဝှက်များကို လေ့လာနိုင်စေရန် ရဥ၁်ရွယ်ပြီး စကားထာပေါင်း ၁၇၀ ကျော်၊ စကားလိမ်ပေါင်း ၁၂၀ကျော် နှင့် စကားဝှက်ပေါင်း ၂၀ကျော်တို့ကို ရနိုင်သလောက် ထဥ၁့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်ရာ၊ ကြဥ၁်နူး ဖွယ်ရာများ အပြင် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာ ရှိသဖြင့် ဥာဏ်စမ်းများ ဖတ်ရှု၍ ပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ။
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် အေးချမ်းမြတ်မုိုးရဲ့ နာရေးဈာပန
Sunday, August 31, 2014 ဓါတ်ပုံ | ဖျော်ဖြေရေး၊ Celebrity
ဓားထိုးသတ်ခံရတဲ့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် အေးချမ်းမြတ်မုိုးရဲ့ နာရေးဈာပနကုို သြဂုတ် (၃၀) ရက်နေက ရန်ကုန်၊ ရေဝေး သုသာန်တွင်ပြုလုပ်
ဓါတ်ပုံ, ဖျော်ဖြေရေး၊ Celebrity,
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျားမကြီးကနေ ကျားနက်ကလေး တကောင် မွေးဖွား
Saturday, August 30, 2014 ထူးဆန်းထွေလာ
တရုတ်နိုင်ငံက Hangzhou ဆိုတဲ့ မြို့ရှိ တိရိစ္ဆာန်ရုံတရုံမှာ ကျားမကြီးတကောင်ကနေ ကျားအနက်တကောင် မွေးဖွားပါတယ်... ဒီကျားပေါက်ကလေးဟာ ပုံမှန် ကျားတွေလို အစင်းအကျားတွေ မပါပဲ တကိုယ်လုံး အနက်ဖြစ်နေတာဟာ အတော်လေး ထူးဆန်းနေပါတယ်... သက်တမ်းကတော့ ၂၅ ရက်သားပဲ ရှိပါသေးတယ်... နောက်ထပ် ထူခြားနေတာက ဒီကျားပေါက်ကလေးဟာ အမျိုးတူသတ္တ၀ါတွေနဲ့ အတူနေရတာကို မနှစ်သက်ပဲ ခွေးတွေကြောင်တွေလို အခြား ခြေလေးချောင်း သတ္တ၀ါတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေရတာကို သဘောကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ။
Flowers Sculptures Art
Saturday, August 30, 2014 အနုပညာလက်ရာ
▼ August (771)
မြန်မာ + ထိုင်း အခြေခံ စကားပြော ဖုန်း Android , Ap...
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် အေးချမ်းမြတ်မုိုးရဲ့ နာရေးဈာပန...
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျားမကြီးကနေ ကျားနက်ကလေး တကောင်ေ...
Zawgyi Ghost Font installer For Mobile
ကလေးကို မဆိုးအောင် ထိန်းကျောင်း ပြုစုနည်း
ကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတန် သရဖူယူပြီး တိမ်းရှောင်နေသည်ဟု...
သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပါသလား
ကင်ဆာ ပျောက်တယ်လို့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ဂျုံမြက်နု အ...
အနီးမီးယား ဆိုတာဘာလည်း …..?
အကောင်းဆုံး မျက်နှာ အသားအရေအတွက် လှို့ ဝှက်ချက်
၀မ်းပျက် ၀မ်းလျောခြင်းအတွက် အိမ်တွင်း ကုထုံးလေးမျာ...
အိန္ဒိယတွင် သခင်၏ သင်္ချိုင်း မြေပုံအနီး နှစ်ပတ်ကြာ စေ...
ပစ်တ်နှင့် ဂျိုလီတို့ လက်ထပ်လိုက်ပြီဟု တရားဝင်ကြေည...
တစ်သက်လုံး ဆီပြန်ဖြည့်စရာ မလိုတဲ့ ကား
သမိုင်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှု့ စုဆောင်းလိုသူတွေ အတွက် (၄...
စိတ် တည်ငြိမ်စေသော ကျင့်စဉ်
မီးမမှန်ပေမယ့် ဓာတ်လိုက်တတ်တယ် သတိထား
Android အတွက် Handwriting Fonts 2014 APK (၇)ခု
Android ဖုန်းတွေမှာ Gtalk_Gmail_Play Store များ ပျ...
ဖုန်းထဲမှာ ဒီဆော့ဝဲလေး ထည့်ထားတာနဲ့အများကြီး အသံ...
WordPress အသုံးပြု သူများအတွက် တည်ဆောက်နည်း အသေးစိ...
နည်းပညာစာအုပ် စုဆောင်း လိုသူများအတွက် ၈၅ အုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖုန်းအမျိုးမျိုး အင်တာနက် လျှောက်...
Xperia Root Kit ( 2014 )
Chili ငရုတ်သီး အရသာ
မျက်နှာသစ်နေချိန် အမှတ်မထင် ပြုမိတဲ့ အမှားကြီး (၇)...
ပုံတစ်ပုံအား Zoom နှင့် ဆွဲရိုက်ခြင်းနှင့် Crop လု...
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်နှင့် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်...
မေမြတ်နိုး၏ Miss Asia Pacific World သရဖူ မီဒီယာမျာ...
ဒုတိယမြောက် ပန်းသီး ရဲ့ အချိန်အခါ
MRI Scan ဖတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးမျ...
နှလုံးနှင့် လေဖြတ်ကို ကျော်ပြီး ထိပ်တန်း တက်လာတော့...
ဒီလို အကျင့်မျိုးတွေဟာ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရ...
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားခြင်းမှ ကယ်တင်ပေးမယ့်...
Nude နဲ့ Sexy ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပေးသူတွေက ဒီလိုယူဆကြတယ်...
လူချစ်ဆေး(၁၀)မျိုး (သို့မဟုတ်) လူမှုဆက်ဆံရေး ရွှေစ...
တစ်လက်မ အချင်းရှိ သံချောင်း ဦးခေါင်းအတွင်းသို့ စိ...
မော်ဒယ် အေးချမ်းမြတ်မိုး ဓားထိုးခံရ၍ သေဆုံး
JAVA leaning Myanmar (PDF)
Samsung Multipackage Firmware Collection
Mobile Guide Journal - Issue 167 (27-08-2014)
iOS 8 With Unicode
Huawei phone များကို Computer နဲ. firmware တင်နည်း...
အသက်ဘေးမှ ထူးထူးခြားခြား လွတ်မြောက်လာသူ ၂ ဦး
ခြေသည်း စုဆောင်းတဲ့ ထူးဆန်း ပုဂ္ဂိုလ်...
အဖွားအိုရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဗျူဟာ....
သူတို့ဆီက အနုပညာဆန်တဲ့ ဗူးသီးများ...
Honor 3C MT6582 မှာ ဖြစ်လေ့ရှိသော flashtool error ...
Ice Bucket Challenge ရေခဲပုံးနဲ့ လောင်းပြီး ရောဂါအ...
ရေနွေးဖြူ မှ ရရှိနိူင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
တင်းနစ်ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးတွင် ဖက်ဒါရာ ထိပ်ဆုံး၌ ရပ...
Firefox တွင် Save လုပ်ထားသည့် Password များကို အလွ...
စစ်မှုထမ်းစဉ်မှာ ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမယ့် လှပတဲ့ဘ၀ကို ဖန်တီး...
လူပေါင်း (၃၅၀၀၀) ဖြင့် နီပေါနိုင်ငံ အလံကို ပုံဖော်...
ဖုန်း ဖိစီးမှု သားကောင် ဖြစ်နေသလား
နှလုံးခုန်နှုန်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှာ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများ စဉ်း...
ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး ဌာနစုအတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား လိုအပ...
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာတွင် လူအများစု မှားတတ်ကြေ...
အမျိုးသားတွေအတွက် ကိုယ်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ...
အာဖရိက အမျိုးသမီးငယ် (၄)ယောက်က လောင်စာဆီအဖြစ် ကျင်...
HTC Desire 600 ကို root လုပ်နည်း
အသက် (၉၉)နှစ်အရွယ်ရှိ အဖွားအိုတဦးရဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်...
သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Chatrium Hotel မှာ က...